Wararka Maanta: Khamiis, Jun 20, 2013-Maamulka Gobolka Hiiraan oo Cambareyn u jeediyay Weerarka lagu qaaday xarunta UNDP ee Magaalada Muqdisho
Guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cabdi Faarax Laqanyo oo la hadllay HOL ayaa sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid fulaynimo ah oo lagu dhibaateynayo shacabka Soomaaliya madaama sida uu sheegay khasaaraha ugu badan weerarkaas uu ka soo gaaray dad rayid ah oo aan waxba galabsan.
''Waan cambaareyneynaa weerarkaas ay soo qaadeen kooxaha argagixisada, waana weerar muujinaya sida ay kooxahaas aysan wax dan ah uga laheyn nolasha dadka shacabka, waxaan rabaa in aan tacsi u dirro dhamaan ehelada dadkii ku geeriyooday weerarka,'' ayuu yiri guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cabdi Faarax Laqanyo.
Weerarka shalay lagu qaaday xarunta UN-ka ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa mas'uuliyadiisa sheegtay xarrakada Al-shabaab oo siweyn uga soo horjeeda dowladda federalka iyo ciidamada ka taageera nabada ilaalinta.
Guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cabdi Faarax Laqanyo ayaa sheegay in weerarada noocaas oo kale wax u dhimi doonin dadaalada nabada ee socda, isaga oo ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay ku gacan siiyaan dowladda fedderaalka sugida amniga.
''Weerada noocaas oo kale ah ma'aha kuwo niyad jabin kara shacabka Soomaaliyeed iyo dadaalka dowladda ay ugu jirto dib u soo celinta nabada, bulshada waa in ay ku gacan siiyaan dowladda sugida amniga,'' ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Hiiraan.
Weerarkii shalay lagu qaaday xarunta hay'adda UNDP ayaa sidoo kale waxaa cambaareeyay maamulada kale ee dalka iyo hay'addo caalami ah.